Nahavotra Ilay Frantsay Mpihanika Tendrombohitra Tao Nanga Parbat, Pakistan Ny Hetsika Fanangonam-bola, Saingy Tsy Avotra Kosa ny Namany Iray Niaraka Taminy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Febroary 2018 6:38 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, عربي, русский, English
Ny Nanga Parbat (Tendrombohitra Miboridana) no tendrombohitra faha-sivy avo indrindra eran-tany sy faharoa avo indrindra ao Pakistana (aorian'ny K2). Sary avy amin'ny Flickr an'i Ahmed Sajjad Zaidi. CC BY-SA 2.0.
Nihanika tendrombohitra mirefy 8.126 metatra hatreny an-tampony i Revol sy Mackiewicz, izay heverina fa iray amin'ireo fianihana tendrombohitra sarotra indrindra manerantany, ary efa nahafatesana olona 60 eo ho eo. Ity no ezak'i Revol fahadimy hahatratra ny tampon-tendrombohitra, ary fahafito ho an'i Mackiewicz, araka ny filazan'ny Pakistan Explorer..
Ao amin'ny #Nanga Parbat @ZabRevol🇫🇷 & Tomek Mackiewicz @czapkins, ao amin'ny Toby 3 (7300). Hanomboka hiady ho an'ny fara-tampony (8126) izy ireo rahampitso. Akombony ny tananao, mandefasa fankaherezana & firarian-tsoa mafana ao #Karakorum, ao Pakistan! Mangatsiaka ny mari-pàna ao amin'ny fara-tampony, manodidina ny -60C. Sary: @Polityka
Noheverina fa tafahanika ny tampony izy roa tamin'ny 20 Janoary, izay mahatonga azy ireo ho ekipa faharoa nahavita fiakarana ririnina hatreny amin'ny tampon'i Nanga Parbat. Nanomboka nidina izy ireo avy eo.
Tamin'ny 26 Janoary, nanambara tao amin'ny Facebook i Janusz Majer, mpandrindra ny fandefasana amin'ny ririnina Poloney fa tafahitsoaka eny amin'ny haavo 7.400 metatra ambanin'ny tampon'ny tendrombohitra i Revol sy Mackiewicz, noho ny tara-pahazavan'ny masoandro “Ultra-Violet” sy ny fijaliana amin'ny vakivaki-panala.
Nanohy nidina i Revol ary niantso fanampiana tamin'ny alalan'ny finday zanabolana.
Tsy nety nandefa angidimby ny orinasa ara-barotra Askari Aviation, an'ny tafika Pakistana raha tsy tafapetraka ny vola antoka, izay voalaza fa fomba fanao mahazatra. Ho valin'izany, nisy ny ezaka roa nokarakaraina ka nahangona vola an'aliny euro vetivety ho an'ny fanampiana. Voalaza fa nanome vola ihany koa ny governemantan'i Polonina.
Antsoina amin'ny solon'anarana hoe “Tendrombohitra Mpamono Olona”, nalaina sary tamin'ny “infra-rouge” i Nanga Parbat. Sary avy amin'ny Flickr an'i Ahmed Sajjad Zaidi. CC BY-SA 2.0.
Tamin'ny vola natao antoka, nandeha ny angindimby ny vondrona mpihanika efatra Poloney, izay nampiato ny fianihan'izy ireo ny tendrombohitra faharoa avo indrindra manerantany, K2, mba hanampy amin'ny fanavotana an'i Revol sy Mackiewicz tafahitsoka ao amin'i Nanga Parbat. Tamin'ny 28 Janoary, avotra i Revol ary nalefa hisidina any Isamabad mba hotsaboana. Voalaza fa nijaly mafy noho ny vakivaki-panala teo amin'ny tànany sy ny tongony izy. Nanery ny ekipa mpamonjy voina mba handao ny fianihana hikaroka an'i Mackiewicz ny toetr'andro tena ratsy.
Pakistaney, mpihanika tendrombohitra, Karim Shah Nizari nankasitraka ny ekipa mpamonjy voina Poloney:
Ireo maherifo Poloney mpihanika ny Nanga Parbat izay nampiato ny fianihan'izy ireo ny K2 ary namonjy aina tao anaty haizina tao amin'ny tendrombohitra mpamono olona
Nampiseho ny dikan'ny ain'olombelona tamin’ izao tontolo izao ianareo
Naneho hevitra momba ny famonjena an'i Revol i Masha Gordon, mpandraharaha Britanika teraka tao Rosia izay nanangana ny fanentanana fanangonam-bola faharoa nalefa tao amin'ny GoFundMe: “Mitomany fifaliana izahay.”
Nahangona vola maherin'ny 50.000 dolara tao anatin'ny adiny roa ity fanentanana ity, ary ny ankamaroan'ireo fanomezana dia avy any Polonina, hoy ny vadin'i Mackiewicz nanoratra tao amin'ny pejy Facebook an'i Mackiewicz. Mbola mitohy ny fanangonam-bola; tamin'ny 30 janoary, nampiseho vola 136.217 euros amin'ny tanjona 150.000 ny pejy GoFundMe .
Tamin'ny hafatra faha-10, nangataka fanampiana bebe kokoa ny fanentanana mba hanohanana ny vadin'i Mackiewicz sy zanany telo:
Tena andro lava sady mandratra fo izany. Raha mbola maka aina taorian'ny aretina ao amin'ny hopitalin'i Islamabad miaraka amin'ny vakivaki-panala goavana i Elisabeth, misaona an'i Tomek kosa isika. Azafady, manomeza am-piantrana mba hanampiana an'i Anna sy ireo zanany telo mahafinaritra. Hangarahara tanteraka izahay amin'ny fandaniana ny vola rehetra ary halefa any amin'ny fianakaviana avokoa ny ambim-bola teo aloha tamin'ny fanavotana.
Nidera ny miaramila noho ny fandraisan'izy ireo anjara tamin'ny iraka fanavotana ny Pakistaney sasany. Omar Qureshi, mpanao gazety, nisioka hoe:
Raha maro ireo media tandrefana mazoto midera ireo mpihanika tendrombohitra Poloney tamin'ny fanavotana an'i Elisabeth Revol – teny fiderana kosa ho an'ny mpanamory ny angidimbin'ny Tafika Pakistana izay nitondra ireo mpihanika tendrombohitra Poloney avy any K2 ka hatrany Nanga Parbat ary nametraka azy ireo teny an-tendrombohitra tamin'ny haavo 6400 metatra
Na dia izany aza, nisy ireo mpisera Twitter malaza nitsikera ny tafika Pakistaney noho ny fahataran'ny asa fanavotana noho ny vola.
Vola dolara no ambony noho ny aina ao Pakistana. Any amin'ny firenena mandroso ianao, mamonjy aina aloha, vao ny fiampangana. Raha nandeha mialoha izy ireo (24h), dia mety ho ambony lavitra kokoa ny herijika nahavotra ny ain'ny roa tonta (Eli sy Tom).
Henatra ho an'ireo media Pakistaney matoritory sy ny fahafatesan'ny klioba mpihanika tendrombohitra ao Pakistan
Raha mankalaza ny fanavotana an'i Revol izao tontolo izao, tsy misy antenaina kosa ny fahaveloman'i Mackiewicz. Najanona ny ezaka famonjena, satria mihevitra ny manampahefana fa maty izy. Ny rainy kosa dia nangataka hetsika iray hafa hanavotana ny zanany:
#NangaParbat — Mangataka aminareo aho mba hanohy ny asa famonjena ho an'i Tomek zanako lahy. Fantatro, tsapako fa mbola velona izy. Afaka mbola miaina mandritra ny 6 andro ao anaty lavaka feno rahona mitovy haavo amin'izany i Tomek. Zazalahy matanjaka sy tena mafy loha izy – hoy ny antson'i Witold Mackiewicz, rain'ilay mpihanika tendrombohitra.
Niresaka tamin'ny media Poloney ny anabavin'i Mackiewicz ary nilaza fa ho fahagagana raha mbola velona izy.